ny toerana travel Filipina zava-Dehibe ny Foto-kevitra Momba Ny Kolontsaina ao Filipina - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
ny toerana travel Filipina zava-Dehibe ny Foto-kevitra Momba Ny Kolontsaina ao Filipina
Ny akanjo ambony dia ny fitafiana
Ny zavatra toy izany, matetika kokoa fantatra amin'ny anarana hoe ny teny anglisy dia maro ny teny nindramina avy amin'ny teny espaniolaNy ankamaroan ny mankalaza fa ny fomban-drazana dia afangaro ny Kristianina, mpanompo sampy, sy ny hafa ao an-toerana ny lanonana. Ho toy ny ohatra, isan-taona, tanàn-dehibe manerana ny firenena, dia ny fanaovana ny andro firavoravoana lehibe, mampahatsiahy ny olo-masina Mpiaro ny tanàna, barangay, na ny distrika. Ny andro firavoravoana matetika dia ny fifaninanana tamin'ny dihy vako-drazana, ary tany amin'ny faritra hafa dia efa mihoatra cockpit. Tahaka izany ny fomban-drazana natao ihany koa ny famoahana ny daty ny amin'ny teny espaniola. Ao amin'ny atsimon'ny firenena izay maro an'isa dia mino fa ny finoana Silamo ihany koa dia mankalaza ny fomba amam-panao sy ny fahazarana. ny fianakaviana, matoky ao amin'ny Tompo, ho mahalala fomba, ny faharetana, ny hoavintsika, ny fankasitrahana, amor proprio, ny fangorahana, ny fifampiankinan'ny, firaisan-kina, fiombonana, delicadeza, ny teny hoe palabra de manaja, tsara ny fandraisana, ny finoanoam-poana sy ny henatra. Izany dia midika olona roa izay nagpipindot ny bararata tsato-kazo eny an-kianja ary amin'ny tsirairay amin'ny andraikitra iray na mihoatra mpandihy naghahakbang etỳ ambonin'ny tany sy amin'ny teo amin'ny tsato-kazo ao anaty dihy. Fa nanaovan'ireo ao Leyte teo anivon ny Visayan nosy ao afovoan'i Filipina toy ny fanahafana ny tikling vorona. Pirenena Akanjo Filipina ofisialy national akanjo ny Filipiana no Barong Zavatra. Izany no anaovana ny Shinoa collarless shirt tinatawagna"de Chino. Ny ofisialy national akanjo, ny sasany ny Filipina dia ny baro tsy i. Ny baro no ambony blouse. Tompon-tany Filipiana BeliefsAng Filipina ny ankamaroan'ny Kristianina firenena nandritra ny telonjato taona ny espaniola. Ao atsimo ny lehibe nosy Mindanao, dia maro ny mpikambana ny finoana Silamo. Filipiana Silamo ny manao ny momba ny dimy isan-jaton'ny mponina nasionaly. Filipiana Kifafa - na dia hatramin'ny am-polo taona vitsivitsy lasa izay, ny teny hoe pamalis (sweeper) dia matetika kokoa ihany koa, ary raha mampiasa izao dia izao, izany dia mbola afaka ho takarina, satria izany no iray italiana ny matoanteny Kifafa, ary izany dia midika ara-bakiteny hoe"zavatra ampiasaina amin'ny fanamboarana". Vehivavy ospreys sy ny lehilahy ospreys - Filipiana vehivavy ospreys sy ny lehilahy ospreys dia vita avy amin'ny taho sy ny ravina ny zavamaniry sy ny fisian'ny anarana siantifika Belamcanda chinensis. Ny nentim-paharazana vehivavy ospreys sy ny lehilahy ospreys dia ny endriky ny lehibe am-po, toy ny am-po miendrika ravina ny hazo Linden. Kulit - Ny teny anglisy fa dia matetika ampiasaina ao amin'ny vazivazy manodidina mba hilazana olona iray izay manelingelina miverimberina, willful, na maharitra ny fanontaniana na mangataka ny famindram-po.
Miakatra - Rehefa Filipiana mandeha an-dalana, na velona tany ivelany, izy no andrasana mba hitondra indray ny fanomezam-pahasoavana momba ny hiverina. Izay no miakatra Izany no tena olana.
Raha toa ka tsy mitondra ahy pasalubong ny olona izay manaiky ianao, mandehana mihevitra izy ireo fa mbola tsy nieritreritra izany raha lavitra anao.
Voalaza fa mponina Katolika Romana
Alum - Alum dia niresaka momba ny zavatra simika izay ny anarany dia matetika omena ny potasioma aluminium solfata.
Izany dia crystalline zavatra izay afaka ny ho colorless na fotsy.
Ny fampiasana ny alum tao amin'ny fanasan-damba sy ny whitening helika.
Izany dia azo jerena ao amin'ny fofona sy amin'ny endrika vovoka. Ny alum dia ampiasaina koa amin'ny alalan'ny Filipiana folk mpanasitrana ny manao famantaran'ny hazofijaliana eo amin'ny handriny ny olona heverina ho niharam-boina ny mpamosavy, na ny goblin.
Bilao - Bilao dia fisaka boribory miendrika vary winnower nentim-paharazana, ny fampiharana ao Filipina.
Izany dia matetika vita amin'ny tenona ny hazo. Tanana - ny avy any amin'ilay espaniola mano, izay midika hoe 'tanana'. Ny ny fomban-drazana ny androm-piainany tafiditra manoroka ny tanan ny taloha na ny fitaizana ny tanana hikasika ny handriny. Ny Tanora no manao izany indrindra nandritra ny fety rehefa mitsidika ny ray aman-drenibe ary mangataka ny fanomezam-pahasoavana. Lihi - Ny vehivavy dia matetika no mitady mafy marikivy vokatra toy ny manga na mananasy mandritra ny fitondrana vohoka. Toetra mampiavaka ny ankizy matetika dia heverina ho misy ifandraisany amin'izay ny reny nihinana mandritra ny fitondrana vohoka. Ny vehivavy bevohoka fa conceives sy mitondra sy mihinana ny manintona katsaka ny cob dia azo inoana fa mba manana ny zanany amin'ny tena mahitsy nify, araka ny finoanoam-poana.
an'aliny pinakamapinsalang horohoron-tany any Filipina
Образложење О Породици - На Пример - Кратак - Дуг